Sida ugu Wanaagsan ee Loo Sameysto CV-ga | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — June 26, 2016
Waa muhiim inaan fahano ama aan barano sidda loo sameeyo CV-ga. Dabcan wax badan waxaad maqashay CV. Uma maleynaayo inaadan waxbo ka aqqoonin sidda loo sameeyo CV-ga, balse waxaan isku dayayaa inaan bixiyo tusaalle wanaagsan oo aad ku fahmi karto sidda ugu wanaagsan ee loo sameeyo CV-ga.
Waa maxay CV?
CV-ga waa warqadda yar ee ay ku qorantahay dhammaan faahfaahinta ku saabsan nafsadaada iyo guud ahaan waxyaabihii aad soo qaadatay sidda waxbarashada heerka aad ka gaartay, siminaarada aad soo qaadatay iyo xirfadaha aad wadato.
Cv-ga waa warqad yar oo aad ku suuqgaynaysid nafsadaada, waxaana loo baahanyahay inaad CV-gaada ku cadeyso sidda ugu wanaagsan ee aad nafsadaada isku suukhgayni karto.
F.G: Iska illaali marwalbo inaad CV-gaada ku qorto waxyaabo ka baxsan anshaxa wanaaga ee ka dhaxeeyo xeerarka shaqada iyo guud ahaan hababka wanaagsan ee shaqada. CV-gaada marwalbo ha noqdo mid ka turjubanaayo inaad tahay shaqsiga ku haboon shaqadaas. Waxaana loo baahanyahay inaad ku qorto qodobo dhawr ah oo ay ka mid yihiin:
Qeybtaan waxaa Loobaahanyahay inaad si fiican ugu qeexdo faahfaahinta aas-aasiga ah sidda magacaaga, Dhalashadaada, Teleefoonka lambarka, Luuqada aad ku hadasho, cinwaanka emailkaada iyo cinwaanka deegaanka aad degantahay oo lagala soo xariiri karo.
Qeybtaan waxaad si diiran ugu qeexaysaa adiga cidda aad tahay, aqqoon ahaan iyo dabeecad ahaan wali adigoo soo koobaayo qoraalkaada, wali iyadoo ay ku dheehantahay qoraal yar oo ku dheehantahay xikmad iyo garaadnimo.
Qeybtaan ayaa iyadana ah qeyb aad u wanaagsan oo lagaaga baahantahay inaad si fiican indhaha ugu hayso sidda ugu wanaagsan ee aad ku hanani karto shaqadaas. Waxaana lagaaga baahanyahay inaad naftaada si fiican u suuqgeyni karto. Si aad naftaada si fiican ugu suuqgayso waxaad u baahantahay inaad marka horre booqato websiteka shirkada aad shaqada ka raadinayso ama ururka aad doonayso inaad u shaqayso noocwalb uu yahay.
Qeybtaan waxaa lagaaga baahanyahay inaad si fiican iyadana u qeexdo shaqooyinka aad soo qabatay, goobta shaqada halka ay ahayd, wadankee ama caasimadee, sanadkii iyo bishee ka soo shaqeysay. Su’aalahaas inaad si fiican ugu jawaabto waxay kaa caawinaysaa inaad tahay shaqsi u qalbi booska shaqadaas. Inta badan maamulayaasha waxay qadariyaan qofka xirfaha kalla duwan leh, sawabtoo ah waxaa la is dhihi karaa waa shaqsi diyaar u ah inuu shaqeeyo madamaa waayo aragnimo dheer uu leeyahay. Hadaba si fiican ugu dadaal inaad ku guulaysato qeybtaan.
Institutions Attended With The Highest Educations
Qeybtaan waxaad ku sharaxaysaa waxbarashada heerka ugu sareeyay ee aad gaartay intii aad waxbarasho ku jirtay, waxaana muhiim ah inaad ku xusto taariikhda aad bilawday iyo taariikhda aad dhammaysay waliba goobta iyo wadanka uu ahaa.
Professional And Training Qualifications
Dabcan wakhtiyadaan dambe dadka waxay qaataan siminaaro kalla duwan iyo waxyaabaha aad ku hesho aqqoon xirgfadeed, qeybtaan waxaa wanaagsan inaad si fiican siddoo kale ugu qeexdo wakhtiga aad qaadatay iyo goobtuba, iyo wuxuu ahaa siminaarkaasi.
Qeybtaan waxaad ku qoraysaa cidda adiga masuul kaa noqoni karto haddii ay wax dhacaan sidda qof la yaqaano oo kale, maxaa yeelay inta badan shaqada la siiyaa dadka aadka loo yaqaano, maxaa yeelay dabcan ummada waxay jecelyihiin shaqsiyaadka aadka loo yaqaano si qofkaas loo helo meel loo raacani karo. Isku day inaad hesho qofka adiga masuulka kaa ah, haddii aad weyso micna malahan waxaad ku qori kartaa waad iweydiini kartaan wixii kale oo aad u baahantihiin “Available upon requests” balse marwalbo aad ayay u fiicantahay inaad ku qorto shaqsi la yaqaano. Haddii aadan haynin shaqsina waa iska caadi irsaaqada Illaahay scw ayaa bixiyo ee waa nasiib.
Tags: Sidda Ugu Wanaagsan Ee Loo Sameeyo CV-ga |Tukesomalism.com
Next post 8 Talaabo Oo Sahlan Ee Aad ku Xabaali Karto Wadankaaga
Previous post Maxay Diinta Islaamka Ka Qabtaa Cunista Qaadka? Tukesomalism.com
yuusuf xaaji xuseen
December 21, 2018 at 3:41 pm	— Reply
Dear Cabdijabaar Sh. Axmed
i am reguesting you to send me these information about how to make cv both somalia and english
October 23, 2019 at 2:56 pm	— Reply
wl waxan raba isagoo afsoomali ah macnaha cvga oo kuqoran afsoomaali
August 27, 2020 at 4:16 pm	— Reply
Waxan Raba cvga soo English ku Quran yahay
July 23, 2020 at 8:57 am	— Reply
waa macluumaad wanagsan oo faahfaahsan in lafahmana ay fududahay
Mustaf omar Ali
October 14, 2020 at 1:45 pm	— Reply